Xukuumadda Somaliland Oo Jawaabo Ka Bixisay Eedaymo Xisbiga Mucaaradka WADDANI Usoo Jeediyay | #1Araweelo News Network
Xukuumadda Somaliland Oo Jawaabo Ka Bixisay Eedaymo Xisbiga Mucaaradka WADDANI Usoo Jeediyay
Hargeysa(ANN)Xukuumadda Somaliland, ayaa jawaab ka bixisay eedaymo Xisbiga Mucaaradka ee WADDANI, kaga yimi, kuwaas oo la xidhiidha arrimaha musuq-maasuq ee Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo lagu canbaareeyo iyo maamul xumo.
Qoraal saxaafada loo qaybiyay oo kasoo baxay caawa qasriga Madaxtooyadda, isla markaana uu ku saxeexnaa Af-hayeenka Madaxweynaha JSL. Xuseen Aadan Cige (Xuseen Deyr), ayaa u qornaa sidan:- “Jawaab la xidhiidha Eedayn culus iyo Aflagaado Qaawan oo uu Xisbiga Waddani u soo jeediyey Xukuumadda, Xisbiga Kulmiye iyo Dawladda Hoose ee Gabiley 05.12.2015.
Siyaasadda hagta Xisbi Qaran oo Mucaarid ah waxay u baahantahay Hayal-samaan, Argti iyo Farsamo Siyaasadeed oo xeel-dheer taasoo salka ku haysa Daacadnimo, Run-sheegnimo, Dulqaad, Hadaf iyo Himilo Siyaasadeed oo Qaran lagu dhiso Ummadna lagu hoggaamiyo.
· Inay la yimaadaan Hadaf iyo Himilo siyaasadeed oo ku salaysan dal jacayl dhab ah, iyagoo mudnaanta iyo muhimadda koowaadba siinaya danta qaranka.
· Inay ka fogaadaan wax kasto oo magac-xumo, sumcad-darro iyo meel ka dhac ku ah ee haybadda qarankeena.
· Waxa looga fadhiyaa inay la yimaadaan isku kalsooni, dhaqan-wanaag siyaasadeed si ay quluubta iyo maskaxda bulshada wanaag u gashadaan, balse aanay mar walba la soo taagnaan cay iyo aflagaado ka arradan dhaqanka suubban iyo akhlaaqiyaadka diineedba.” ayaa lagu yidhi qoraalka.